Tsar Fyodor Godunov: जीवनी, बोर्ड र समीक्षा विशेष
Fedor Godunov बस्थे , 1589-1605-एँ रूस को tsar र प्रसिद्ध cartographer थियो। लामो, केही अप्रिल देखि जुन 1605-औं गर्न महिनाको लागि नियम।
यो राजकुमार असामान्य शिक्षा संग जम्मा गरिएको छ। उहाँले बोरिस Fedorovich र मारिया Grigorievna जेठो छ। Godunov Fedor Borisovich अझै पनि एक बच्चा थियो जब, आफ्नो बुबा autocratically रस शासन गर्न थाले।
बाल्यकाल देखि, केटा राजाको क्रममा आदर सुनाए। आफ्नो नाम समारोह को पदहरूमा संकेत गरेपछि दरबारमा स्वीकार गर्न गर्दा कूटनीतिक उपहार पठाए। केटा यो ध्यान किनभने Fedor भविष्यमा Rurikovich संग kinship को निष्कर्षमा तयार भएको थियो। उहाँले पहिले नै हकदार राजकुमार भएका थिए, उनको पिता 1598-एम मा शासन गर्न थाले को समारोह मा देखियो।
त्रिएकको-Sergius को आश्रममा मा सेवा गर्ने भिक्षुहरूले औं 1599 मा, आफूलाई Fyodor Godunov, त्यतिबेला पुग्यो, दस को उमेर लेखे पत्र पठाए। त्यतिबेला राजा बिरामी थिए र तीर्थ भ्रमण गर्न असमर्थ थियो।
राजकुमार को राजदूतको संग एक साधारण भाषा फेला लागि, Duma मा boyars संग महत्त्वपूर्ण विषय मा कुराकानी गर्न, राज्य को टिकट सिकाउनुभयो। उहाँले Xenia, आफ्नो बहिनी को हात सोध्न आए जो केटाहरूलाई भेटे। साथै, यो आफ्नो बुबा को आरोप मा थियो जो दान र मुद्दा, बिना उत्पन्न भएन।
Fedor Godunov मुख्य रूप अप Ivanom Chemodanovym, एक परिणाम धेरै शिक्षित जवान भयो रूपमा जसद्वारा ल्याए। भविष्यमा, यो एक प्रबुद्ध शासकको रूपमा सम्झना गरिनेछ। यो व्यक्ति रूस को सरकारी बीच शिक्षा को युरोपेली सिस्टम को आवेदन को पहिलो पक्ष भनिन्छ हुन सक्छ। उहाँले पनि गर्ने अफवाहहरु कि जवान गम्भीर बिरामी र पागलपन सिर्जना detractors थियो।
बोर्ड फेडोरा Godunova सबैभन्दा अनुकूल अवस्थामा सुरु भएन। बोर्ड गर्न प्रवेश र यसको अन्त समय को लम्बाइ अत्यन्तै छोटो र अग्निपरीक्षाहरू द्वारा overshadowed छ।
जो अघिल्लो राज्यपाल मृत्यु किनभने मस्कोमा, झूटो दिमित्री म आक्रमण। अपनाए पहिले Godunov शपथ यस्तो मान्छे तिनीहरूले Otrepyev साँचो शासक हो भनेर सहमत हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास जो संग अनुसार व्याख्या थियो। राजनीतिक अन्योल र शक्ति लागि मुद्दा युद्ध को एक अवधि।
Fedor Godunov हामी खातामा लडाइँका अनुभव कमी लिन भने, गाह्रो थियो, शासन आफ्नो दायाँ पुनः प्राप्त गर्न भएको थियो। त्यो त केवल 16 वर्षका थिए। झूटो दिमित्री विरुद्ध सफलतापूर्वक लडेका छन् कि परिवार - म मद्दत Basmanova भर थियो।
यो च्याम्पियनशिप को लागि एक भीषण लडाई र मान्छे को प्रेम थियो। जवान राजा को साथीहरू तिनीहरूले आफ्नो पिता सम्झना थियो जो मानिसहरू, बाहिर उपहार हस्तान्तरण। मान्छे पहिले क्षमादान प्राप्त परेका। तिनीहरूलाई एक पछि राजा Fedor Godunov विषय थियो जो गिरफ्तारी, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ठूलो-मामा बोरिस Belsky शासक थियो।
सबै प्रयत्न गरे तापनि अपेक्षित परिणाम हासिल भएको थिएन। नजिकैको एक जो थियो प्रभु एफ Mstislavsky धेरै अपराधीहरूमाथि थिए। तिनीहरूले योजना Fedor हत्या, तर एक राजकुल र त बोर्ड को सातौं हप्तामा चरमोत्कर्षलाई को चरण फन्दामा पतन, overtaken बनाउन।
कि पहिला, पत्थर ईटाहरु को उत्पादन को लागि पत्थर र बिरुवाहरु संग जो काम गरे वास् गर्न अधीनस्थ थिए जो निर्माण, को आरोप मा, मन्त्रालयले को कार्य प्रदर्शन गर्ने क्रम स्थापित। यो बस्तियों को बजेट, निर्माण सामाग्री जसमा उत्पादन नियन्त्रण गर्न यो संस्था हो।
त्यहाँ एफ Godunov यसको आफ्नै सिक्का minted कि बारेमा कुनै विश्वसनीय डाटा छन्। त्यहाँ जो यसको नाम मौद्रिक एकाइहरु थिए अनुसार संस्करण छ। यदि यो सत्य हो, यो छ - आफ्नै टिकट छ नगर्ने राजाहरूको मात्र एक।
यसको हस्ताक्षरहरू पैसा मा पाउन सकिन्छ, Borisu Godunovu श्रेय। शासन सम्पूर्ण इतिहास धेरै विशिष्ट र असामान्य सकिन्छ भनेर साथै, यो शासक शासन मा, ताज पहनाया छैन।
अन्त को शुरुवात
जवान शासक मानिसहरूलाई जित्न गर्न एक विशाल प्रयास गरेको छ। हामी त्यही र boyars गरिरहेका छन्। तर, सबै सैनिकहरू उहाँलाई पालन गर्न चाहन्छु, विभिन्न सामाजिक समूह बीच गम्भीर खिचलो द्वारा सुनेपछि एक विभाजित थियो।
झूटा दिमित्री आफ्नो अधीनमा ठूलो जनता जित्न सक्षम थियो। शिविरमा त्यहाँ नियमित skirmishes थिए। Fedor बिस्तारै थप र थप आफ्नो पूर्व समर्थकहरूको को परिवर्तन, सबै कम उहाँले समर्थन थियो। को वैध राजा वफादार बाँकी केहि सेना, किनभने आफ्नो कमजोरी को पराजित गरेका थिए।
को अपराधीहरूमाथि छेउमा थिए Cossacks Korely गम्भीर विरोधीहरूले छन्। Fedor गर्ने भाडामा श्रम लागि उदार तलब भुक्तानी जर्मन, विश्वास गर्न सकिएन। जबकि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको थप निःशुल्क महसुस र आफ्नै व्यक्ति साँचो शासक उल्लेख। अब देशद्रोही को शीर्षक Godunov पहिले नै फैलियो।
जो शासन राजकुल विद्रोहीहरूको भन्दा सिर्जना गरेको यातना को खतरा, तापनि यो संक्रमण छैन निको हुन सकेन। यो विद्रोह नियन्त्रण बाहिर मिल्यो। tsar परिवार मात्र केही विनाश देखि Kremlin मा लुकाउन रहनेछ। अब विद्रोही मात्र होइन तर पनि यसको आफ्नै मान्छे खतरा गम्भीर कारक हो। सबै सम्राट को जम्मा भन्दा। राजा Fedor Godunov पछि शासन आए - झूटो दिमित्री आई
हामी विदेशी र रूसी समकालीनहरूको एक समीक्षा कुरा भने, domineering व्यवहार Borisa Godunova सिकार रूपमा सम्पूर्ण परिवार छलफल गर्न सकिन्छ। उहाँले राजा दिमित्री अघि मारे। यसको लागि परमेश्वरको म उसलाई र आफ्नो परिवारलाई भन्न थियो। त्यसैले आफ्नो "अन्य पौराणिक कथा" मा बेनामी विषय लाइन मा यस्तो लेखे जो वी Shumsky, भन्छन्।
त्यसैले Fedor, बौद्धिक र सक्षम युवा पुरुष हुनुको, प्रतिकूल परिस्थितिमा एक असिना आए। जमीन तिनीहरूलाई लागि बुबा तयार गरिएको छ। अन्य अवस्थामा जूनियर Godunov समृद्धि देश, हामी थाह छ, ल्याउन सक्छ, तर इतिहास लेखन गर्न सक्दैन। समस्याहरूको को समय, अँध्यारो quagmire रूपमा आफ्नो उज्ज्वल मन र प्रगतिशील विचार swallowed।
SA Lebedev, वैज्ञानिक उपलब्धिहरू र व्यक्तिगत लचक एक संक्षिप्त जीवनी
जीवनी Malyuta Skuratov किन stalin वर्ष मा romanticized
Nikolai Kondratiev, सोभियत अर्थशास्त्री: जीवनी, अर्थव्यवस्था लागि योगदान
हाइड पाठक: के राम्रो ई-पुस्तक किन्न छ
गर्भावस्था प्रभावकारी र सुरक्षित antipyretic
गैर-फलाम धातु र यसको भूगोल
गर्भवती महिलाका लागि साँझ कपडे
को "Rosneft" मा काम गर्न जानकारी कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ
कसरी हात आकर्षित गर्न? बारम्बार प्रश्न कलाकारहरूको उदीयमान
होटल Himeros बीच होटल3* (Kemer): समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
कुंभ मा भेनस: को भाग्य मा प्रभाव
वालपेपर टाँसिएको: कोठा को क्षेत्र कसरी मापन गर्ने?
ASUS - देश उत्पादनहरु को एक सिंहावलोकन उत्पादन,
अनन्त छुट्टी - यो गुच्ची रश 2